May 11, 2022 - Achawlaymyar
အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေ သေသေချာချာမသိသေးတဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးကြီး ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
May 11, 2022 by Achawlaymyar
ပရိသတ်ကြီးေ ရသရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြ ည်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ် သူကတော့မြ ကာေ သးမီကမှ မတရားဖ မ်းဆီးခံထားရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မှာတော့ ပရိသတ်တွေလုံးဝ မသိသေးတြဲ့ ပည်သူချစ်သ ရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်း ကြည်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြော င်းကိုဂု ဏ်ယူ စွာဖော်ပြလိုက် ရပါတယ်နော်။ ခိုင်သင်းကြည် (၁၉၇၂-)သည်ြ မန်မာလူမျိုး သရုပ်ဆောင်ဖြ စ်သည်။ ၁၉၇၂ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင်ဒု တိယဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်နှင့် ဒေါ်ဝါဝါစိုးတို ့ကရန်ကုန်ြ မို့အမှတ် (၂) စစ်ဆေးရုံတွင်မွေး ဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာ ခိုင်သင်းကြည်ပင်ဖြစ်သည်။ ရနကွုနတွကကြ သိုလွ၌ပညာ ဆညွးပူးသငကွှား ခဲ့ပှီး သိပြ ပံ (ဓာတုဗဒေ)ဘှဲ့ရရှိသညွ။ ဒါရိုကတွာစ ငရွောမွောင မွောငွ၏ မိုးယံသို့ လှင့ပွှံစ မယေ့ွ … Read more
PDF ရဲဘော်တို့ကို သူတို့အလှနဲ့ ထောင်ဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် တုန်လှုပ်နေပါပြီ ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို
PDF ရဲဘော်တို့ကို သူတို့အလှနဲ့ ထောင်ဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် တုန်လှုပ်နေပါပြီ ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို PDF လေးတွေ သတိထားကြပါ။ စကစဘက်က ယုတ်မာနေပါပြီ။ ရဲဘော်တို့ကို သူတို့အလှနဲ့ ထောင်ဖမ်းမယ်တဲ့။ အဇမ်းတုန်လှုပ်နေပြီ။ ဆိုပြီး ပန်ဆယ်လို အကောင့်ကနေ ပြောင်နောက်ထားတာကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ PDF ရဲဘော်တို့ကို သူတို့အလှနဲ့ ထောင်ဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် တုန်လှုပ်နေပါပြီ ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို PDF လေးတွေ သတိထားကြပါ။ စကစဘက်က ယုတ်မာနေပါပြီ။ ရဲဘော်တို့ကို သူတို့အလှနဲ့ ထောင်ဖမ်းမယ်တဲ့။ အဇမ်းတုန်လှုပ်နေပြီ။ ဆိုပြီး ပန်ဆယ်လို အကောင့်ကနေ ပြောင်နောက်ထားတာကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ zawgyi PDF ရဲေဘာ္တို႔ကို သူတို႔အလွနဲ႔ ေထာင္ဖမ္းမယ္ … Read more
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဇနကဟောကိန်း
သင်​့အသက်​ဘယ်​​လောက်​လဲ? ဘာ​နေ့​မွေးလဲ?သာမှန်​မှန်​​ပြောပါ…မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနကဟောကိန်း… ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထ်ိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. ဥပမာ – မိမိက တနင်္ဂနွေသားသမီး အခုရောက်သက် ၂၅ နှစ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေ ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၅ ကို ရှာပါ။ * နန်း * အကွက်ထဲတွင်ရှိ၍ ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ မိမိက တနင်္လာသားသမီး အခုရောက်သက် ၂ဝနှစ်ဆိုရင် တနလာင်္ဇယားကွက်ထဲတွင် ၂၀ ကိုရှာပါ။ * ပျက်* အကွက်ထဲတွင်ရှိသောကြောင့် ထိုအဟောကိုဖတ်ပါ။ တည်​ တည်​ဆိုတာ … Read more
သတိ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဖုန္းအလုခံရ. ပိုက္ဆံအိပ္အလုခံရ. အဲ့ထက္ဆိုးတာ က႐ိုက္လုၿပီး အသက္ေသဆုံးသည္အထိ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး လုယက္ျခင္း အဖြဲလိုက္ ဓားျဖင့္ခုတ္ ၿပီး႐ိုက္လုျခင္း ေနစဥ္ေနတိုင္း တၿမိဳ႕လုံး တစ္ေနရာ မဟုတ္ တစ္ေနရာ ျဖစ္ေနတာပါ။အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူကို မွ အားကိုးလို႔မရ မွန္းအားလုံးအသိပါ။ဒါေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို (အထူး)သတိႀကီးႀကီး ထားၿပီးေနထိုင္ ၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။ ၁။ ဆိုင္ကယ္စီးလွ်င္ ဖုန္းမေျပာပါႏွင့္၊ ဆြဲလုပါတယ္။ဖုန္း ၊ ပိုက္ဆံ အိပ္ ခါးၾကား မထိုးပါနဲ႔။ ၂။ ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ တြင္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုက္ဆံ အမ်ားႀကီး မထည္ပါနဲ႔၊ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴသာ ထည့္ထားပါလိုင္စင္ATM. အေရးႀကီး ကဒ္မ်ား မလိုအပ္ပဲ ပိုက္ဆံအိပ္ထဲ မထည့္ပါနဲ႔ ၊ ဖုန္း … Read more
မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူဝလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြရင်း ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်သူသူ…
Zawgyi မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူဝလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြရင်း ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်သူသူ… အော် လူတွေများ အကြောင်းရင်းမသိပဲ အားနေကဲ့ရဲ့ မယ်ဆိုတာချည်းပဲ … MRTV4 မင်းသမီးမြတ်သူသူကို အားလုံး သိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မြညို လို့ နယ်ဘက်ကလူတွေ အသိများခဲ့တဲ့ သဘာဝမင်းသမီးလေး မြတ်သူသူဟာ ညိုညိုချောချောလေးနဲ့ စကားပြောပွင့်လင်းရိုးသားသူပါ။ ဘယ်ဇာတ်ကားမှာမဆို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ပရိတ်သတ်အချစ်တွေနဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားသူလေးပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမြတ်သူသူတစ်ယောက် အရင်ထက်ပိုပြီးပုည့်လာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ချစ်တဲ့သူတွေကတော့ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ ချစ်စရာလေးစိတ်ချမ်းသာလို့ထင်တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တစ်ချို့သူတွေကတော့ သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ဝေဖန် မှုတွေ ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ အစကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဝလာလိုက်တာ လို့ လူအများပြောဖန်များလာတဲ့အခါ မြတ်သူသူတစ်ယောက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တကယ်တော့ သူမထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူဝလာတဲ့ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ် ဒါကတော့ သူမဟာ ဓမ္မတာလာချိန်မှာ … Read more
ရန္ကုန္တြင္ ည ၉ နာရီအခ်ိန္ ေလယာဥ္သံမ်ား ၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ
ရန္ကုန္တြင္ ည ၉ နာရီအခ်ိန္ ေလယာဥ္သံမ်ား ၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၀ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ည ၉ နာရီအခ်ိန္ ေလယာဥ္သံမ်ားၾကားရၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ မီးခိုးေငြ႕မ်ား ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုၾကသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကင္း၊ ဗဟန္း၊ တာေမြ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ျမဴက်သကဲ့သို႔ မီးခိုးေငြ႕မ်ား ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပ ည္သူမ်ားက ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။ “ည ၉ နာရီ ေလယာဥ္သံေတြ ၾကားရၿပီးေတာ့မွ မီးခိုးေငြ႕ေတြ ေတြ႕ရတာ။ ျမဴေတြေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ထဲေတြပါဝင္တာ။ မီးခိုးေငြ႕ေတြ။ ေလယာဥ္နဲ႔ ျဖန္းသြားတယ္ထင္တာပဲ။ ျမဴက်ရင္ ေလယာဥ္ ဘယ္ပ်ံလို႔ရမလဲ။ ဘာေတြ … Read more
(၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသတင္း အမွတ္စဥ္(၂၀/၂၀၂၂) (၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္) (က) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(Cyclonic Storm) “အာစန္နီ(Asani)” အေျခအေန (၁) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၈:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(Severe Cyclonic Storm) “အာစန္နီ(Asani)”သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘ က္သို႔ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) “အာစန္နီ(Asani)” အျဖစ္သို႔ အားေလ်ာ့သြားခဲ့ကာ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မာခ်ီလီပတၱနမ္ၿမိဳ႕(Machilipatnam)၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ ေရမိုင္(၃၀)မိုင္ခန႔္၊ ကာကီနာဒါၿမိဳ႕(Kakinada)၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ ဘက္ ေရမိုင္(၉၅)မိုင္ခန႔္၊ ဗီဆာကာပတၱနမ္ၿမိဳ႕(Vishakhapatnam)၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္(၁၆၅)မိုင္ခန႔္၊ ဂိုလ္ပါပူၿမိဳ႕(Gopalpur)၏ ေတာင္- အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္(၂၉၅)မိုင္ခန႔္၊ ပူရီၿမိဳ႕(Puri)၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ ေရမိုင္(၃၅၅)မိုင္ခန႔္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ … Read more
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မိကျောင်း၆ကောင်ကို မွေးစားထားပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက်တွေ..See more
လူအများစုမှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် ခွေးလေး၊ ကြောင်လေးတွေကို အများဆုံးမွေးမြူထားကြကာ အသားစားမိကျောင်းတွေကိုတော့ မွေးစားဖို့မပြောနဲ့ ဘယ်သူကမှ အနားပင်မကပ်ရဲကြပါ။ သို့ပေမယ့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အသက်၂၀ကျော်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မိကျောင်းမွေးမြူရေးပိုင်ရှင်တစ်ဦးဆီကနေ မိကျောင်းပေါက်လေးတွေကို ဝယ်ယူပြီးတော့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေလို သတ်မှတ်ပြီးတော့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည် အပြင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထွက်လည်မည့်အစား မိကျောင်းပေါက်လေးတွေကိုသာ ပိုပြီးဂရုစိုက်ကာ နွေးထွေးစွာဆက်ဆံပေးခဲ့ခြင်းဖြင့် မိကျောင်းပေါက်လေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့သခင်ပေါ်သိတတ်ကာ အတူအိပ် အတူစားဘဝနဲ့ ရန်မပြုပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည် သူမရဲ့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်မိကျောင်းတွေနဲ့အတူ တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းပုံကို လိုင်းပေါ်တွင် မျှဝေခဲ့ရာ မြင်တွေ့သူများမှ မိန်းကလေးအစား ထိတ်လန့်နေကြပြီး အန္တရာယ်ပြုလာမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ Rain (For Ialinks) Unicode အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မိကျောင်း၆ကောင်ကို မွေးစားထားပြီး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက်တွေလို တပူးပူးတကပ်ကပ်နေခဲ့သော မိန်းကလေး … Read more
မုန်တိုင်းငယ်သတိ ၂၀၂၂ မေလ ၁၈ရက်နေ့မှ ၂၅ရက်နေ့အတွင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးကို လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(သို့မဟုတ်) မုန်တိုင်းငယ်တစ်လုံးရောက်ရှိနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတဲ့အတွက် ကြိုတင်သတိထားပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရက်ဝေးကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် မုတ်သုန်လေဆွဲတင်မယ့်အခြေအနေပါပဲ ဒါကြောင့် မေလမကုန်မှိ မုတ်သုန်လေစောစီးစွာဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် မင်းဂွတ်သီးလေးက အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည်ထောက်လှမ်းကာ အဆင့်မြင့် weather datacများဝယ်ယူပြီး ခန့်မှန်းပေးနေပါမယ် မုန်တိုင်းသတိလူအများကြိုတင်သိရှိကြစေရန် share ပေးထားကြပါ I S S U E D T I M E 09/05/2022 at 7:15PM(MMT) မင်း ဂွတ် သီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္မည့္ မုန္တိုင္းတစ္လုံးအေၾကာင္း ရက္ႀကိဳခန႔္မွန္းေပးလိုက္တဲ့ စုစုစံ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္မည့္ မုန္တိုင္းတစ္လုံးအေၾကာင္း ရက္ႀကိဳခန႔္မွန္းေပးလိုက္တဲ့ စုစုစံ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္မည့္ မုန္တိုင္းတစ္လုံးအေၾကာင္း ရက္ႀကိဳခန႔္မွန္းေပးလိုက္တဲ့ စုစုစံ … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် ၂၀၂၂ မေလ (၁၁) ရက်မှ (၂၀) ရက်အတွင်း ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ယၾတာလက္ေဆာင္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၂၂ ေမလ (၁၁) ရက္မွ (၂၀) ရက္အတြင္း အေရးၾကဳံလၽွင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ယၾတာလက္ေဆာင္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္တကြ တစ္မိသားစုလုံးစိတ္ညစ္စရာ ၊ စိတ္ပူစရာ ၊ စိတ္ေသာကေရာက္စရာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားမွ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေကာင္းေသာ အႀကံအစည္ရည္ရြယ္မ်ား အျမန္ဆုံး ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ …။ မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ မင္းသိမ္းခိုင္ – ေရႊရမ္းထူးလင္း မိုးရာသီကိုႀကိဳလင့္ေသာ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလးမ်ား မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ားၾကားမွ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူး စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ေမလ၏ေန႔ရက္မ်ား ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း ) ၏ ေန႔စဥ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ားကို နားဆင္လိုပါက တယ္လီေနာဖုန္းနံပါတ္ (၃၀၄၃) ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ ( တစ္ပတ္လၽွက္ ၃၁၅ က်ပ္ ၊ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခပါၿပီး ) #ကေလးအမည္ေပး လူတစ္ေယာက္အတြက္ နာမည္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္ … Read more